कालो र सेतोमा मुद्रण
श्याम श्वेतमा छाप्दा
पाठ र ग्राफिक्स कालो र सेतोमा मुद्रण
फाइल - मुद्रणरोज्नुहोस। मुद्रण गर्नुहोस संवाद खुल्दछ।
गुणहरूमा क्लिक गर्नुहोस। यसले तपाईँको मुद्रकका लागि गुणहरू संवाद खोल्दछ।
कालो र सेतोमा मुद्रण गर्नलाई संवाद चयन गर्नुहोस। अरू जानकारीका लागि,तपाईँको मुद्रकको प्रयोगकर्ताको म्यानुअल सन्दर्भ गर्नुहोस।
गुणहरू संवाद यकीन गर्नुहोस र मुद्रणक्लिक गर्नुहोस।
हालको कागजात कालो र सेतोमा मुद्रण हुनेछ।
LibreOffice इम्प्रेस र LibreOffice चित्र भित्र कालो र सेतोमा मुद्रण
Choose LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice Impress or LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice Draw, as appropriate.
त्यसपछि मुद्रण गर्नुहोस् रोज्नुहोस् ।
गुण, अन्तर्गत यात ग्रेस्केल वा कालो र सेतो चयन गर्नुहोस र ठीक छ क्लिक गर्नुहोस।
जब यिनीहरू मध्ये कुनै विकल्प चयन गरिन्छन, सबै प्रस्तुतीकरणहरू वा चित्रहरू रङ बाहेक मुद्रण हुनेछन। यदि तपाईँले वर्तमान मुद्रण कार्यका लागि कालोमा मुद्रण गर्न चाहेमा,फाइल - मुद्रण- LibreOffice ड्रा / छाप्नुहोस् मा विकल्प चयन गर्नुहोस।
ग्रेस्केल ले सबै रङहरूलाई २५६को अधिकतमग्रेडियन्ट गर्ने काम सम्म कालो बाट सेतोमा परिवर्तन गर्दछ। सबै पाठहरू कालोमा मुद्रण हुनेछन ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठभूमिद्वारा सेट गरिएको एउटा पृष्ठभूमि मुद्रण हुनेछैन।
कालो र सेतोले सबै रङहरूलाई कालो र सेतो गरी दुई मानहरूमा परिवर्तन गर्दछ।वस्तुहरू वरिपरीका सबै किनारहरू कालो मुद्रण हुनेछन।ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठभूमिद्वारा सेट गरिएको एउटा पृष्ठभूमि मुद्रण हुनेछैन।
पाठ मात्र कालो र सेतोमा मुद्रण
LibreOffice लेखकमा तपाईँले रङ-ढाँचावद्ध पाठ लाई कालो र सेतोमा मुद्रण गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मुद्रण गर्नुपर्ने सबै क्रमानुगत पाठ कागजातहरूका लागि वा हालको मुद्रण प्रक्रियाहरूका लागि मात्र यो वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै पाठ कागजातहरू कालो र सेतो बाट मुद्रण
Choose LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice Writer or LibreOffice - PreferencesTools - Options - LibreOffice Writer/Web.
सामग्रीहरू अन्तर्गत, कालो मुद्रण गर्नुहोस चिनो गर्नुहोस र ठीक छक्लिक गर्नुहोस।
सबै पाठ कागजातहरू वा HTML कागजातहरू कालो पाठ बाट मुद्रण हुनेछन।
हालको पाठ कागजात कालो र सेतो पाठ बाट मुद्रण
फाइल - मुद्रणरोज्नुहोस। त्यसपछि LibreOffice लेखक क्लिक गर्नुहोस्।
सामग्रीहरू अन्तर्गतकालो मुद्रण गर्नुहोस चिनो गर्नुहोस र मुद्रणक्लिक गर्नुहोस।
LibreOffice - PreferencesTools - Options dialog
Title is: कालो र सेतोमा मुद्रण